ကျောက်​မဲ​မြို ့​နယ်​တွင်း ​အ​ထက်​ရဲ​ရွာ ​ရေ​ကာ​တာ ​ဆိုဒ်​အ​နီး​တွင် ​ဗ​မာ​အ​စိုး​ရ​စစ်​သား​တို့ ​က ​အ​ရပ်​သား​တို့​ကို ​ညှင်း​ပန်း​နှိပ်​စက်​မှု၊​ဥ​ပ​ဒေ​မဲ့ ​သတ်​ဖြတ်​မှု​များ - ရှမ်းလူ့အခွင့်အရေးမဏ္ဍိုင် (SHRF)
ကျောက်​မဲ​မြို ့​နယ်​တွင်း ​အ​ထက်​ရဲ​ရွာ ​ရေ​ကာ​တာ ​ဆိုဒ်​အ​နီး​တွင် ​ဗ​မာ​အ​စိုး​ရ​စစ်​သား​တို့ ​က ​အ​ရပ်​သား​တို့​ကို ​ညှင်း​ပန်း​နှိပ်​စက်​မှု၊​ဥ​ပ​ဒေ​မဲ့ ​သတ်​ဖြတ်​မှု​များ
ဇွန်​လ ၁ ​ရက် ၂၀၁၆ ​ခု​နှစ်
​ကျောက်​မဲ​မြို့​နယ်​တွင်း ​အ​ထက်​ရဲ​ရွာ ​ရေ​ကာ​တာ ​ဆိုဒ်​အ​နီး​တွင် ​ဗ​မာ​အ​စိုး​ရ​စစ်​သား​တို့ ​က ​အ​ရပ်​သား​တို့​ကို ​ညှင်း​ပန်း​နှိပ်​စက်​မှု၊​ဥ​ပ​ဒေ​မဲ့ ​သတ်​ဖြတ်​မှု​များ​အ​ပြင် ​ရှမ်း​ပြည်​တိုး​တက်​ရေး​ပါ​တီ၊​ရှမ်း​ပြည်​တပ်​မ​တော် SSPP/SSA ​တို့​တိုက်​ခိုက်​စဉ်​အ​ရပ်​သား ​တို့​ကို ​တိုက်​ပွဲ​တွင်း ​လူ​သား​ဒိုင်း​အ​ဖြစ် ​အ​သုံး​ပြု​ခဲ့​သည်။
​မေ​လ ၂၀၁၆ ​ခု​နှစ်​မှ ​စ​ပြီး ​ရှမ်း​ပြည်​နယ်​မြောက်​ပိုင်း ​ကျောက်​မဲ​ခ​ရိုင်​တွင်း​ရှိ ​အ​ထက်​ရဲ​ရွာ ​ရေ​ကာ​တာ​ဆိုဒ်​အ​နီး​တွင် ​ဗ​မာ​စစ်​အ​စိုး​ရ​တပ်​မ​တော် ​နှင့် ​ရှမ်း​ပြည်​တိုး​တက်​ရေး​ပါ​တီ၊ ​ရှမ်း​ပြည်​တပ်​မ​တော် SSPP/SSA ​တို့​နှင့်​ရင်​ဆိုင်​တို်က်​ခိုက်​မှု​မှ ​စ​ပြီး ​ဗ​မာ​စစ်​အ​စိုး​ရ​တပ်​မ​တော် ​တို့​က ​လူ့​အ​ခွင့်​အ​ရေး​ကို ​ပြင်း​ပြင်း​ထန်​ထန် ​ချိုး​ဖောက် ​ခါ ​စစ်​ရာ​ဇ​ဝတ်​မှု​ကို​ကျူး​လွန်​နေ​သည် ။
​မေ​လ ၃ ​ရက်​နေ့ ၂၀၁၆ ​ခု​နှစ် ​ဗ​မာ​အ​စိုး​ရ​တပ်​မ​တော် (​ခ​မ​ရ ၃၂၅၊ ၅၀၂၊ ၅၀၃ ၊၁၁၄) (၄)​တပ် ​မှ ​စစ်​သား (၅၀၀) ​တို့​မှာ ​အ​ကြောင်း​ကြား ​သ​တိ​ပေး​ခြင်း​မ​ရှိ​ပဲ ​ကျောက်​မဲ​မြို ့​တောင်​ဘက်​ရှိ ​ရှမ်း​ပြည်​တိုး​တက်​ရေး​ပါ​တီ၊ ​ရှမ်း​ပြည်​တပ်​မ​တော်(SSPP/SSA)​ဌာ​န​ချုပ် ​ရှိ​ရာ​သို့ ​တိုက်​ခိုက်​သည်။
​ဗ​မာ​အ​စိုး​ရ​တပ်​တော်​နှင့် ​ရှမ်း​ပြည််​တိုး​တက်​ရေး​ပါ​တီ၊ ​ရှမ်း​ပြည်​တပ်​မ​တော် ( SSPP/SSA) ​တို့​မှာ ​အ​ပစ်​ခတ်​ရပ်​စဲ​ထား​သော်​လည်း ​တစ်​ကယ့်​လက်​ရှိ​တွင် (SSPP/SSA) ​တို့ ​နှစ်​ပေါင်း​များ​စွာ ​က​တည်း​က​ပင် ​ထို​နေ​ရာ​တွင်​လှုပ်​ရှား​လာ​ခဲ့​သည်။
​တစ်​ပတ်​ကျော် ​ပြီး​နောက်​တိုက်​ပွဲ​ပြင်း​ပြင်း​ထန်​ထန်​ဖြစ်​ခဲ့​သည်။ ​ဗ​မာ​အ​စိုး​ရ​စစ်​တပ်​တို့ ​က ​မေ​လ ၁၃ ​ရက်​နေ့​တွင် ​စစ်​ရ​ဟတ်​ယာဉ် ​ဖြင့် ​ရွာ​ပေါင်း (၈)​ရွာ ​ကို​ဗုံး​ကျဲ ​ပြီး ​မေ​လ ​လယ်​တွင် ​နေ​ရာ ​အ​များ ​ကို ​ဗ​မာ​အ​စိုး​ရ​တပ်​မ​တော် ​ခ​လ​ရ ၂၃၊ (​ခ​မ​ရ ၅၀၁၊ ၅၀၄၊၁၁၅၊၁၇) ​စစ်​သား (၁၀၀၀) ​လောက်​က ​ထိန်း​ချုပ်​ခဲ့​သည်။ ​ရွာ​သူ၊​ရွာ​သား (၁၀၀၀) ​တို့​မှာ ​၎င်း​စစ်​ပွဲ​တို်က်​ခိုက်​မှု ​တွေ​ကြောင့် ​အ​ခြား​သို့​ထွက်​ပြေး​တိမ်း​ရှောင်​လိုက်​ရ​သည်။
​ဤ​စစ်​ပွဲ ​အ​တွင်း​တွင် ​ဗ​မာ​အ​စိုး​ရ​တပ်​မ​တော််​က ​လူ့​အ​ခွင့်​အ​ရေး​ချိုး​ဖောက်​မှု ​တို့​ကို ​စိုး​ရိမ်​ဖွယ်​ရာ ​ကျူး​လွန်​နေ​ပြီး ​ရွာ​သား (၄၃) ​ယောက်​တို့​အ​ပါ​အ​ဝင် ​အ​မျိုး​သ​မီး ​နှင့် ​အ​ရပ်​သား​တို့​ကို ​သူ​တု့ိ​အ ​ကာ​အ​ကွယ် ​လူ​သား​ဒိုင်း​အ​ဖြစ်​အ​သုံး​ချ​ခဲ့​သည်။ ​ရွာ​သား(၅) ​ယောက်​တု့ိ​ကို​ညှင်း​ပန်း​နှိပ်​စက်​ရိုက် ​နှက် ​ပြီး ​ဥ​ပ​ဒေ​မဲ့​အ​ရပ်​သား(၃) ​ယောက်​တို့​ကို​သတ်​ဖြတ်​ခဲ့​သည့်​ပြင် ​နောက်​အ​လောင်း (၅) ​ခု​ကို​တွေ့​ရ​သည်။
​အောက်​တွင်​ဖော်​ပြ​ထား​သော ​ကျူး​လွန်​မှု​တို့​၏ ​အ​ကျဉ်း​ချုပ်
​ ​ကျူး​လွန်​ခံ​ရ​သူ ​ကျူး​လွန်​မှု​ပုံ​စံ ​ကျူး​လွန်​ရာ ​နေ​ရာ
မေ ၁၁-၁၂ ​ရက် ၂၀၁၆
​ ရွာ​သား(၃၀) ​အ​ပြင်​အ​မျိုး​သ​မီး​အ​ပါ​ဝင် ​ ​အ​ရပ်​သား​တို့​ကို​လူ​သား​ဒိုင်း​အ​ဖြစ်​လုပ် ​နမ့်​အွန်​ရွာ​မှ ​ဖါ​လျဲုမ်း
မေ ၁၃​ရက်၂၀၁၆ ​ရွာ​သား(၁) ​ဦး စိတ်​ဖောက်​ပြန် ​အ​ရပ်​သား​တို့​ကို ​ဦး​တည်​ပြီး ​ရ​ဟတ်​ယာဉ် ​မှ​ဗုံး​ကျဲ၊​ပစ်​ခတ်အက်​ကြီး​ရွာ ​ကျောက်​မဲ​မြို ့​နယ်
မေ ၁၄​ရက်၂၀၁၆ ​ရွာ​သား (၅)​ယောက် ထင်​တိုင်း​ဖမ်း​ဆီး၊​ရိုက်​နှက်၊ ​အ​ဓ​မ္မ ​ပ​စ္စည်း​ထမ်း​ခိုင်း ​နမ့်​ဖတ်
မေ ၁၄ ​ရက်
၂၀၁၆ ​ရွာ​သား (၃)​ဦး (၁)​ဦး
​ဒဏ်​ရာ​ရ​ရှိ ဥ​ပ​ဒေ​မဲ့​သတ်​ဖြတ်(​မီး​ရှိူ ့​သတ်​ဖြတ်​မှု ​အ​လောင်း) ​နမ့်​ဖတ်​ရွာ
၂၀၁၆ ​အိမ်​ခြေ​ပေါင်း (၉၇)​အိမ်​ခန့် ​ရွာ​သူ၊​သား ​တို့​၏ ​အ​စား​အ​စာ၊​တစ်​ခြား​ပိုင်​ဆိုင်​မှု ​အ​ပြင် ​အိမ်(၂)​အိမ် ​မီး​ရှိူ ့​နမ့်​ဖတ်၊​အက်​ကြီး၊ ​ဝိုး​လုံ​ရွာကျောက်​မဲ​မြို ့​နယ်
၂၀၁၆ ​ရွာ​သား(၆) ​ဦး ​ရွာ​သား​တွေ​အား ​စစ်​အ​ကာ​အ​ကွယ်​လုပ်​ခိုင်း​ပန်​လော့​မှ ​နောင်​ကွမ်​ရွာ​ထိ
မေ၂၀-၂၁​ရက်၂၀၁၆ ​ရွာ​သား (၆)​ဦး
(​ရွာ​သူ​ကြီး​အ​ပါ​ဝင်) ​ရွာ​သား​အား ​စစ်​ပွဲ​၏​အ​ကာ​ကွယ်​အ​ဖြစ်​လုပ်​ခိုင်း​နောင်​ကွမ်ကျောက်​မဲ​မြို ့​နယ်
၂၀၁၆ အ​လောင်း​တွေ့(၅) ​ဦး​မှာ (​အ​မည်​မ​သိ​ရ​သေး​ပေ) ​​ဥ​ပ​ဒေ​မဲ့​သတ်​ဖြတ်(​မီး​ရှိူ ့​သတ်​ဖြတ်) ​ဝိုး​လုံ
​ထိုု်​သို့​သော​ရာ​ဇ​ဝတ် ​ပြစ်​မှု​ကျူး​လွန်​၍ ​စစ်​ပွဲ​ဖြစ်​အောင်​လုပ်​ဆောင်​မှု​ကို ​ကျွန်​တော်​တို့ ​ရှမ်း​လူ့ ​အ​ခွင့်​ရေး​မ​ဏ္ဍိုင်​မှ​ပြင်း​ပြင်း​ထန်​ထန်​ရှူတ်​ချ​လို်က်​သည်။​ပြစ်​မှု​ကျူး​လွန်​သူ​တို့​ကို ​တ​ရား​ဥ​ပ​ဒေ​အ​ရ​အ​ရေး​ယူ​ရန်၊​တား​မြစ်​ပေး​ရန် ​တောင်း​ဆို​သည်။
​ဗ​မာ​အ​စိုး​ရ​တပ်​မ​တော်​မှ​ခု​လို SSPP/SSA ​တို့​ကို ​ဆက်​လက်​တိုက်​ခို်က်​မှု​သည် ​ငြိမ်း​ချမ်း​ရေး ​ကို​လောင်​ပြောင်​မှု ​အ​ဖြစ် ​နိုင်​ငံ​တ​ကာ​အ​သိုင်း​ဝိုင်း​က ​ထုတ်​ဖော် ​ရှုတ်​ချ​သင့်​ပေ​သည်။ ​မေ​လ ၁၆ ​ရက်​နေ့​တွင် ​အီ​ယူ(EU) ​မှ ​သံ​တ​မန်​ကိုယ်​စား​လှယ် (​ကျောက်​မဲ​အ​ရှေ့) ​သီ​ပေါ​မြို ့​သို့​လာ ​ရောက်​ခဲ့​စဉ်​တွင် ​ဗ​မာ​အ​စိုး​ရ​တပ်​မ​တော်​မှ ​ရက်​စက် ​ကြမ်း​ကြုတ်​သော​တိုက်​ခိုက်​မှု​များ ​ကို​အ​ပြစ်​တင်​မှု​မ​ရှိ​ခြင်း​မှာ ​ကျ​နော်​တု့ိ ​ရှမ်း​လူ့​အ​ခွင့်​အ​ရေး​မ​ဏ္ဍိုင်​မှ ​လွန်​စွာ​ဝမ်း​နည်း​ရ​ပါ​သည်။
​အ​ခု​ဖြစ်​ပေါ်​နေ​သော​တိုက်​ပွဲ​များ​သည် ​အ​ထက်​ရဲ​ရွာ​ရေ​ကာ​တာ​ဆိုဒ်​တွင်​ဖြစ်​နေ​သည်​ကို​ကျ​နော်​တု့ိ ​ရှမ်း​လူ့​အ​ခွင့်​အ​ရေး​မ​ဏ္ဍိုင်​မှ ​သိ​သာ​ထင်​ရှား​စေ​ချင််​ပါ​သည်။​ဒေ​သ​ခံ​များ​က ​ရေ​ကာ​တာ​စီ​မံ​ကိ်န်း ​ကို​ပြင်း​ပြင်း​ထန်​ထန် ​ကန့်​ကွက်​ဆန့်​ကျင်​သည်။​ခု​လို​တိုက်​ခိုက်​မှု​ဖြစ်​နိုင်​ချေ​မှာ ​ဆက်​လက်​တည် ​ဆောက်​ဆဲ ​ရေ​ကာ​တာ ​ဆိုဒ်​တွင်​လုံ​ခြုံ​ရေ​တွက် ​နေ​ရာ​ချ​ထား​နိုင်​ရန် ​နှင့် ​သိမ်း​ယူ​ထိန်း​ချုပ် ​နိုင်​ရန်​ဖြစ်​သည်။ ​နိုင်​ငံ​တ​ကာ​ကု​မၸ​ဏီ​များ​ပါ​ဝင်​သည့် ​ဤ​ရေ​ကာ​တာ​အ​ပြင်​အ​ခြား​သော ​န​မ္မ​တူ ​မြစ်​ပေါ်​မှ ​ရေ​ကာ​တာ​များ ​တွင် ​ဆွီစ်၊ ​ဂျာ​မန်၊​နော်​ဝေး၊​ဂျ​ပန် ​နှင့် ​တ​ရုတ်​ကု​မၸ​ဏီ​များ ​ပတ်​သက်​ဆ က်​နွယ်​မှု​အား​လုံး ​ချက်​ချင်း​ဆိုင်း​ငံ့​ရပ်​စဲ​ပါ ​ကျ​နော်​တို့ ​ထပ်​တောင်း​ဆို​ပါ​သည်။ှု ။​သို့​မ​ဟုတ်​ပါ​က ​ဗ​မာ​အ​စိုး​ရ​တပ်​မ​တော်​၏ ​ပြစ်​မှု​ကျူး​လွန်​မှု​များ​တွင် ​တာ​ဝန်​ရှိ​သူ​များ​အ​ဖြစ် ​စွပ်​စွဲ​ခံ​ရ​နိုင်​ဖွယ်​ရှိ​ပါ​သည်။
​မေ​လ ၁၁ ​ရက်​နေ့​မှ ၂၀ ​ရက် ၂၀၁၆ ​ရက်​ထိ ​ကျောက်​မဲ​မြို ့​နယ်​တွင်း ​ဗ​မာ​အ​စိုး​ရ​တပ်​မ​တော်​မှ ​လူ့​အ​ခွင့်​ရေး​များ​ချိုး​ဖောက်​မှု​မှတ်​တမ်း​အ​သေး​စိတ်
​ရွာ​သား (၃၀) ​ယောက်​တို့ ​အား​လူ​သား​ဒိုင်း ​အ​ဖြစ် ​ဗ​မာ​အ​စိုး​ရ​စစ်​တပ်​က ​အ​တင်း​အ​ဓ​မ္မ ​အ​သုံး​ပြု​ခဲ့​သည်။
​မေ​လ ၁၁ ​ရက်​နေ့​တွင် ​ဗ​မာ​အ​စိုး​ရ​စစ်​သား (၁၀၀) ​လောက်​တို့​မှာ ​နမ့်​အွန်​နား​မွန်း၊ ​ကုန်း​ညု ​ကျေး​ရွာ​အုပ်​စု ​မှ ​အ​ရပ်​သား (၃၀) ​ယောက်​တို့​အား ​၎င်း ​တို့​ကို ​ဖါ​လျဲုမ်း ​ရွာ​သို့ ​ဦး​ဆောင် ​ခေါ်​သွား​ရန်​မှာ​ကြား​သည်။​ရွာ​သား​တို့​မှာ ​ဗ​မာ​အ​စိုး​ရ​စစ်​သား​တို့ ​အ​တင်း​အ​ဓ​မ္မ ​ခိုင်း​စေ​မှု​ကြောင့် ​ရှေ ့​မှ​ဦး​ဆောင်​ခေါ်​သွား​ရ​သည်။
​မေ​လ ၁၁ ​ရက်​နေ့ ​နံ​နက် ၇ ​နာ​ရီ ​မှ ​တစ်​နေ့​နှင့် ​တစ်​ည​လုံး​လျှောက်​ခိုင်း​ပြီး​နံက်် ၉ ​နာ​ရီ ​ဖါ​လျဲုမ်း ​ရောက်​သည်​အ​ထိ​လျှောက်​ခဲ့​ပြီး ​နောက်​နေ့​နံ​နက်​မိုး​လင်း​မှ​သာ ​ရွာ​သား​တွေ​ပြန် ​လည်​လွှတ်​လာ ​သည်။ ​ဗ​မာ​အ​စိုး​ရ​စစ်​သား​တို့​မှာ ​၎င်း​တို့​ရွာ​သား​အား ​အ​စာ​ရေ​စာ​ကို ​ခ​ရီး ​တစ်​လျှောက်​လုံး ​မ​ပေး​ခဲ့​ပေ။ ​အ​ချို ့​ရွာ​သား​တို့​မှာ​သူ​တို့​စစ်​သား​လွယ်​အိတ်​ကို ​သယ်​ဆောင် ​ပေး​ရ​သည်။
​မေ​လ ၁၃ ​ရက်​နေ့ ၂၀၁၆ ​တွင် ​အ​သက် (၆၀) ​နှစ်​ရှိ​လယ်​သ​မား​တစ်​ဦး​မှာ ​ဗ​မာ​အ​စိုး​ရ​စစ် ​ရ​ဟတ်​ယဉ်​ဖြင့် ​ပစ်​ခတ်​လိုက်​ခြင်း​ကြောင့် ​သူ​အား​စိတ်​ဝေ​ဒ​နာ​တစ်​ဦး​ဖြစ်​သွား​ရ​သည်။
​ထို​နေ့​တွင် ​အက်​ကြီး​ရွာ ​ဟိုင်း​ကွေ​ကျေး​ရွာ​အုပ်​စု​မှ ​လုံး​အောင်​ထွန်း ​သည် ​သူ​၏​လယ်​ကို​ကြည့်​ရှု ​ရန် ​ရွာ​ပြင်​ရှိ​သူ​၏ ​လယ်​သို့​ သွား​နေ​ခဲ့​သည်။ ​ထို​စဉ် ​လေ​ယာဉ်​သံ​ကြား​ရ​သ​ဖြင့် ​ကြည့်​ရန် ​သူ​၏​လယ်​တဲ​မှ ​ပြေး​ထွက်​ခဲ့​သည်။ ​ထို်​စဉ် ​စစ်​လေ​
ကြောင်း​မှ​သူ့​အား​တွေ့​သ​ဖြင့် ​ဗုံး ၃ ​လုံး​ကျဲ​ပြီး ​စက်​သေ​နတ်​ဖြင့် ​သူ့​အား​ပစ်​ခတ် ​တို်က်​ခိုက်​ခဲ့​သည်။​ကံ​ကောင်း​စွာ​ဖြင့်​သူ့​အား​မ​ထိ​ခိုက်​ပေ​မဲ့ ​သူ ​ဆိုး​ရွား​စွာ​တုန်​လှုပ်​ခဲ့​သည်။ ​ထို​ရွာ​သား​သည် ​သူ​၏ ​မိ​သား​စု ​ဆီ​သို့​ပြေး​ပြီး​သူ​ကြုံ​တွေ့​ဖြစ်​ပျက်​သ ​မျှ​ကို​ပြော​ပြ​ခဲ့​သော်​လည်း ​အဲ့​ဒီ​နောက်​ပိုင်း​မှ​စ​၍ ​သူ​သည်​စိတ်​ဝေ​ဒ​နာ​ခံ​စား​ရ​ကာ ​သူ​၏​မိ​သား ​စု​ကို​ပင် ​မ​မှတ်​မိ​နိုင်​တော့​ပေ။ ​၎င်း​ရွာ​သား​သည် ​က​လေး​နှစ်​ယောက် ​အိမ်​ထောင်​သည်​ဖြစ်​သည်။
​ရွာ​သား (၅) ​ယောက်​ကို ​ရိုက်​နှက်​ထု​ထောင်း​ခြင်း၊ ​လျှပ်​စစ်​နှင့် ​ရှော့(ခ်)​တိုက်​ပြီး ​ပ​စ္စည်း​သယ်​ခိုင်း
မေ​လ ၁၄ ​ရက် ၂၀၁၆ ​တွင် ​ဗ​မာ​အ​စိုး​ရ​စစ်​တပ် ​ခ​မ​ရ (၅၀၄) ​မှ ​ရွာ​သား ၅ ​ယောက်​ကို​ဖမ်း​ဆီး​ပြီး​ညှင်း​ပန်း​နှိပ်​စက်​ခါ၂ ​ည ​ချုပ်​ထား​ပြီး ​ပ​စ္စည်း​သယ်​ခိုင်း​ရန်​အ​သုံး​ပြု​ခဲ့​သည်။
၁. ​စိုင်း​စိန် ​အ​သက် ၂၈ ​နှစ် ​အက်​ကြီး​ရွာ
၂. ​စိုင်း​ပန်​စိ​တ္တ ​အ​သက် ၃၆ ​နှစ် ​အက်​ကြီး​ရွာ
၃. ​စိုင်း​န​န္ဒိ​ယ ​အ​သက် ၃၆ ​နှစ် ​အက်​ကြီး​ရွာ
၄. ​လုံး​မောင်​ခန် ​အ​သက် ၄၀ ​နှစ် ​အက်​ကြီး​ရွာ
၅. ​စိုင်း​ဆု​ဇေ​ယျ ​အ​သက် ၄၅ ​နှစ် ​နမ့်​ဖတ်​ရွာ
​ရွာ​သား​အ​များ​စု​မှာ ​အက်​ကြီး​ရွာ​မှ ​ဖြစ်​ပြီး ​မေ​လ ၁၂-၁၃ ​ရက်​မှ​စ​၍ ​ပန်​လော့ ​ဘုန်း​ကြီး​ကျောင်း​သို့ ​ထွက်​ပြေး​တိမ်း​ရှောင်​ခို​လုံ​နေ​ခဲ့​သည်။ ​စိုင်း​စိန်၊ ​စိုင်း​ပန်​စိ​တ္တ၊ ​စိုင်း​န​န္ဒိ​ယ၊ ​လုံး​မောင်​ခန်၊ ​တို့​မှာ ​သူ​တို့​အိမ်​ကို​စောင့်​ကြည့်​ရန်​နေ​ခဲ့​ကြ​သည်။​မည်​သို့​ပင်​ဖြစ်​ပါ​စေ ​မေ​လ ၁၄ ​ရက်​နေ့ ​အ​စော ​ပိုင်း​က​တည်း​က ​ပြင်း​ပြင်း​ထန်​ထန်​တိုက်​ခိုက်​မှု​တွေ​ကြား​ပြီး​နောက် ​သူ​တို့​အိမ်​က​နေ ​ပန်​လော့ ​သို့​ထွက်​ပြေး​တိမ်​ရှောင်​ရန်​ဆုံး​ဖြတ်​ခဲ့​သည်။
​ထို​အ​ချိန်​တွင် ​စိုင်း​ဆု​ဇေ​ယျ ​သည် ​ပန်​လော့ ​သို့​ထွက်​ပြေး​တိမ်း​ရှောင်ခ့ဲ​သူ​တစ်​ဦး​ဖြစ်​ပြီး ​ယ​ခု​သူ​၏ ​အိမ်​မှ​မွေး​ထား​သော​ကျွဲ​နွား​တိ​ရိ​စ္ဆာန်​ကို​ပြန်​လည်​ကြည့်​ရှူ​ရန်ု​ပြန်ခ့ဲ​သည်။​စိုင်း​ဆု​ဇေ​ယျ ​သည်​နမ့်​ဖတ် ​ဘုန်း​ကြီး​ကျောင်း​သို့​ဖြတ်​ကျော်​စဉ်​ဗ​မာ​အ​စိုး​ရ​စစ်​မှ​သူ့​အား​ဖမ်း​ဆီးခ့ဲ​သည်။
​ရွာ​သား ၅ ​ယောက်​မှာ ​ရိုက်​နှက်​ကန်​ကြောက်​ချင်း ​နှင့် ​ရိုင်​ဖယ်​သေ​နတ်​ဒင်​ဖြင့် ​ထု​ထောင်း​ခြင်း ​ခံ​ရ​သည်။​ဒါး​ဖြင့်​လည်း ​လှီး​သည်။ ​ရှမ်း​စစ်​သား​တို့​နှင့်​အ​ဆက်​အ​သွယ်​ရှိ​သည်ြ့​ပင်​ရှမ်း ​စစ်​သား​တွေ​ကို​စား​နပ်​ရိ​က္ခာ​တ​တို့​နှင့်​ငွေ​တွေ​ကို​ထောက်ပ့ံ​ဆက်​သွယ်​လား​ဟု ​ဗ​မာ​စစ်​သား​တို့​၏ ​မေး​မြန်း​ခြင်း​ခံ​ရ​သည်။
​ရွာ​သား ၂ ​ယောက်​ဖြစ်​သော ​စိုင်း​န​န္ဒိ​ယ၊ ​စိုင်း​ဆု​ဇေ​ယျ ​ခ​န္ဓာ​ကိုယ်​ပေါ်​တွင် ​ဝါ​ယာ​ကြိုး၊ ​ဘက်​ထ​ရီ ​တို့​ကို ​အ​သုံး​ပြု​ပြီး​လျှပ်​စစ်​ဖြင့်​တို့​သည်။
​ရွာ​သား​များ​ကို​လက်​ပြန်​ကြိုး​တုတ်​ပြီး​မျက်​လုံး​ကို​မိန်း​မ​ထ​မီ​စ​ဖြစ်​ပိတ်​သည်။​ဗ​မာ​စစ်​သား​များ ​ထို​ရွာ​သား​များ​ကို​ဘုန်း​ကြီး​ကျောင်း​ဆွမ်း​ချက်​ဆောင်​တွင်​အ​စာ​ရေ​စာ​မ​ပေး​ပဲ ၂ ​ည ​ခေါ်​ထား​သည်။
​စိုင်း​န​န္ဒိ​ယ​က ​ဖြစ်​ပျက်​သ​မျှ​ကို​ပြန်​ပြော​ပြ​သည်။ “ ​ဗ​မာ​စစ်​သား​များ​က ​ဓါး​ကို​အ​သုံး​ပြု​ပြီး ​ကျ​နော့်​လည်​ပင်​ကို ​အ​ကြိမ်​ကြိမ်​လှီး​ဖြတ်​တယ်။​ကျ​နော့်​ကို ​သူ​တို့​ရိုင်​ဖယ်​သေ​နတ်​ဒင်​နဲ့ ​မျက်​နှာ၊​နှာ​ခေါင်း၊​ရင်​အုပ်​နဲ့ ​ပါး​စပ်​ကို​ထု​ရိုက်​တယ်။​ပြီး​ရင် ​သူ​တို့ ​ဘက်​ထ​ရီ​မှ ​ဆက်​သွယ်​ထား​သော ​အီ​လက်​ထ​ရစ် ​ဝါ​ယာ​ကို​အ​သုံး​ပြု​ပြီး ​ကျ​နော်​၏​ကျော၊ ​ညာ​ပ​ခုံး​နှင့် ​ရင်​အုပ်​တို့​ကိုေ ​ရှာ့(ခ်) ​တိုက်​သည်။ ​သူ​တို့ ​ကျ​နော့်​ရဲ့​ခြေ ​နှင့် ​လက်​ကို​ကြိုး ​တုတ်​ချည် ​နှောင်​ပြီး ​ရိုင်​ဖယ်​သေ​နတ်​ဒင်​ဖြင့် ​ကျ​နော့် ​ညို ့​သ​ကျည်း ​ကို​ထု​ထောင်း​သ ည်။​သူ​တို့​ကျ​နော့်​မျက်​စိ​ကို​အ​ဝတ်​နှင့် ​စီး​ထား​သည်။ ​ထို​အ​ချိန်​တွင် ​ကျ​နော့်​ပါး​စပ်​မှာ ​သွေး​များ​ယိုး​စီး​ကျ​လာ​သည်။ ​ကျ​နော့်​ရဲ ့​အင်္ကျ ီ​မှာ​သွေး​များ​ဖြင့်ေ ​ပ ​ကျံ​ကုန်​သည်။​ကျ​နော့်​မျက်​စိ​လည်း​နာ​ကျဉ်​တယ်။​ကျ​နော်​တို့ ​ကို၂ ​ည ​ပေး​မ​အိပ်​ဘူး။”
​မေ​လ ၁၆ ​နောက်​နေ့​ထိ​မျက်​လုံး​အ​ဝတ်​စ​ပိတ်​လျှက် ​ဗ​မာ​စစ်​သား​များ​က​စစ်​ကျော်​ပိုး​အိပ် ၁၀ ​ကီ​လို​ဂ​ရမ်​လောက် ​ယောက်​တိုင်း​ကို​သယ်​ခိုင်း​သည်။​နမ့်​ဖတ်​ဘုန်း​ကြီး​မှ​ပန်​လော့​ဘုန်း​ကြီး​ကျောင်း ၅ ​ကီ​လို​မီ​တာ​လျောက်ခ်ိ်ုင်း​သည်။​နောက်​မှ​သာ ​မျက်​စိ​ပိတ်​ထား​သော​အ​ဝတ်​စ​ကို ​ဖယ်​ပေး​သည်။​ပန်​လော့​ရွာ​သား​နှင့်​ဘုန်း​ကြီး​တစ်​ချို့​က ​သူ​တို့​သည်​ရွာ​သား​တွေ ​ဖြစ်​သည် ၊​ရှမ်း​စစ်​သား​တွေ ​မ​ဟုတ်​ကြောင်း ​အာ​မ​ခံ​ပေး​မှ​သာ ​လွတ်​လာ​ကြ​သည်။
​စိုင်း​န​န္ဒိ​ယ ​သည်​ညှင်း​ပန်း​နှိပ်​စက်​ခြင်း​ပြင်း​ထန်​သည်​ဟု ​ကျောက်​မဲ​မြို့​နယ် ​ဆေး​ရုံ​တွင် ​ဝန်​ခံ​ဆေး​ကု​သ​မှု​ခံ​ယူ​သည်။
နောင်ကွမ်ကျေးရွာမှ ရွာသား ၃ ဦး၏ ကြွင်းကျန်အလောင်း
​မေ​လ ၁၄ ​ရက်​နေ့ ၂၀၁၆ ​ခု​နှစ် ​ဗ​မာ​စစ်​သား​များ ​ဖမ်​ဆီး​ခေါ်​ဆောင်​သွား​ရာ ​သက်​သေ​တွေ့ ​ပြီး​နောက်​ပိုင်း​တွင် ၁၉ ​ရက်​နေ့ ၂၀၁၆ ​ခု​နှစ်​တွင် ​မီး​လောင်​သေ​ဆုံး​သူ ​ရုပ်​ကြွင်း​ကျန် ​ရွာ​သား ၃ ​ယောက်​အား ​ပန်​လော့​တောင်​ဘက်​တွင် ​တွေ့​ရှိခ့ဲ​သည်။
​ထို​ရွာ​သား ၃ ​ယောက်​သည် ​နောင်​ကွန်​ရွာ​မှ​ဖြစ်​သည်။​၎င်း​ရွာ​သား​နာ​မည်​တို့​မှာ ​အောက်​ပါ​အ​တိုင်း​ဖြစ်​သည်။
​အ​မည် ​ အ​သက် ​မိ​ဘ​အ​မည် ​ မိ​သား​စု
၂၇ ​လုံး​ပန်+​ပါ​ငြိမ်း ​ဇ​နီး၊​အေး​ခမ်း​ဆာ(၂၃)​နှစ်
၂ ​စိုင်း​အိုက်​မတ် (​စိုင်း​အိုက်​နောင့်​၏​အ​ကို)မှတ်​ပုံ​တင်၊ ၁၃/​က​မ​န(​နိုင်)၀၉၀၆၀၈ ၃၀ ​လုံး​ပန်+​ပါ​ငြိမ်း ​ဇ​နီး၊​အေး​ပု(၂၃)​နှစ် ​က​လေး(၃)​ယောက် (​အ​သက် ၇​နှစ်
​တစ်​ယောက် ​အ​မွှာ (၂)​ယောက် ၃​နှစ် )
၃ ​စိုင်း​အိုက်​တိင့် (​သို့)​စိုင်း​ဆု (​စိုင်း​အိုက်​နောင့် ၊ ​စိုင်း​အိုက်​မ တ် ​တို့​နှင့်​ဆွေ​မျိုး) ၂၆ ​လုံး​ခို်+​ပါ​နန်း​အွေ့ ​ဇ​နီး၊​အေး​ခမ်း​ပူး
မေ​လ ၁၃ ​ရက်​နေ့​တွင် ​အက်​ကြီး​ရွာ ​အ​နီး​တွင် ​စိုင်း​အာ​စိန်​န ​လည်​ပင််း​ကို ​သေ​နတ်​ထိ​မှန်​ဒဏ် ​ရာ​ရ​ခဲ့​သည်။ ​ထို​အ​ချိန် ​ရှမ်း​ပြည််​တိုး​တက်​ရေး​ပါ​တီ၊​ရှမ်း​ပြည်​တပ်​မ​တော် (SSPP/SSA) ​တို့​အား ​အ​စာ​ရေ​စာ ​ဝေ​နေ​ချိန် ​ဗ​မာ​အ​စိုး​ရ​စစ်​နှင့် ​တိုက်​ပွဲ​ဖြစ်​နေ​စဉ်​ဖြစ်​သည်။ ​စို်င်း​အာ​စိန်​န ​သည်​သူ​၏​ဖုန်း​ဖြင့် ​သူ​အ​မျိုး​အား​ဖုန်း​ဆက်​ကာ ​အ​ကူ​ညီ​တောင်း​သည်။​မေ​လ ၁၄ ​ရက်​နေ့​တွင် ​သူ​၏ ​အစ်​ကို​စိုင်း​အိုက်​မတ်၊​အ​မျိုး​ဖြစ်​သူ​စိုင်း​အိုက်​တိင့် ​တို့​မှာ​မော်​တော်​ဆိုင်​ကယ်​ဖြစ် ​သူ့​အား ​ခေါ်​ခဲ့ ​သည်။​စိုင်း​အာ​စိန်​န ​အား​ခေါ် ​ပြန်​လာ​ရာ ​နမ့်​ဖတ်​ရွာ​အ​နီး​တွင် ​ဗ​မာ​စစ်​သား​များ​က ​သူ​တို့​အား​ဖမ်း ​ဆီး​လိုက်​သည်။​ထို​အ​ဖြစ်​ကို ​နမ့်​ဖတ်​ရွာ​သား​အ​ချို ့​က​တွေ့​သည်။
​မေ​လ ၁၉ ​ရက်​နေ့​တွင် ​ပန်​လော့​ရွာ​မှ ​ရွာ​သား ၆ ​ယောက်​မှာ ​ဗ​မာ​စစ်​သား​များ​မှ ​အ​တင်း​အ​ဓ​မ္မ ​နောင်​ကွမ် ​သိုိ့ ​လမ်း ​ပြ​ခို်င်း​ခဲ့​ဖူူး​သည်။ ​နမ့်​ဖတ်​နှင့်​ပန််​လော့ ​အ​ကြား​ရှိ ​မက်​မုံ့​ကန့်​လျဲန် ​တွင်​သူ​တို့ ​သေ​ဆုံး​သူ ၃ ​လောင်း​အား​သွား​ရောက်​ရှင်း​လင်း​ရန်​ကျော်​ဖြတ်​လာ​စဉ်​တွင်​ဖြစ်​သည်။​ပန်​လော့​ရော က်​ချိန်​တွင်​သူ​တို့ ​ရွာ​သူ​ကြီး​အ​ချို ့​ကို ​သ​တင်း​ပေး​ခဲ့​သည်။​၎င်း ​သေ​ဆုံး​သူ​အ​လောင်း (၃) ​လောင်း​မှာ ​နောင်​ကွမ် ​ရွာ​သား​ဖြစ်​နိုင်​ပြီး ​မေ​လ ၁၄ ​ရက်​နေ့​က​ဖမ်း​ဆီး​ခေါ်​ဆောင်​သွား​သူ​များ ​ဖြစ်​သည်​ဟု ​ပြော​ပြ​သည်။​သူ​တို့​မှာ ​နောင်​ကွမ်​ရွာ ​၏ ​သူ​ကြီး​ကို ​ဖုန်း​ဆက်​ခေါ်​ပြီး ​မေ​လ ၁၉ ​ရက်​နေ့​တွင် ​အ​ချို ့​ရွာ​သား​တို့​မှာ​ကား​မောင်း​၍ ​သေ​ဆုံး​သူ​အ​လောင်း​ရှိ​ရာ​သို့​သွား​ရောက်​ကြည့်​ရှု​ခဲ့​သည်။ ​ရွာ​သား​တို့​မှာ ​သေ​ဆုံး​သူ ၃ ​ဦး ​မည်​သူ​မည်​ဝါ​ဖြစ်​ကြောင်း​နှင့် ​သူ​တို့​ဆောင်း​ခဲ့​တဲ့ ​ဦး​ထုတ်​ကို ​မှတ်​မိ​သည်။ ​ရွာ​သား​များ ​နောက်​တစ်​နေ့​အ​ထိ​ထား​၍ ​မေ​လ ၂၀ ​ရက်​နေ့​မှ ​သေ​ဆုံး​သူ​တို့​၏ ​အ​ရိုး​တွေ​ကို ​ပြန်​လည်​သွား ​ရောက်​ပြီး ​ပန်​လော့ ​ဘုန်း​ကြီး​ကျောင်း​သို့​ယူ​ဆောင်​ခဲ့​သည်။​မေ​လ ၂၁ ​ရက်​နေ့​တွင် ​သေ​ဆုံး ​သူ​တို့​တွက် ​ရည်​စူး​၍ ​ကု​သိုလ်​ဒါ​န​လုပ်​ဆောင်​ပေး​ခဲ့​သည်။
​ရွာ​သုံး​ရွာ​အ​တွင်း​ရိှ ​စား​နပ်​ရိ​က္ခာ ​နှင့်​အ​သုံး​အ​ဆောင်​ပ​စ္စည်း​များ ​ဖျက်​ဆီး​ခံ ​ရ​ခြင်း။
​မေ ၁၄၊ ၂၀၁၆ ​တွင် ​အိမ်​ခြေ ၄၀ ​ရှိ ​တဲ့ ​နမ့်​ဖတ်​ရွာ ​ကို ​ဗ​မာ့ ​အ​စိုး​ရ​တပ်​မ​တော် ​မှ​တစ်​အိမ် ​ပြီး​တစ်​အိမ် ​တံ​ခါး​ပေါက်​များ ​ကို​ဖျက်​ဆီး ​ခြင်း ၊ ​စား​နပ်​ရိ​က္ခ ​နှင့် ​စိုက်​ပျိုး​ရန် ​မျိုး​စေ့ ​အိ်တ်​များ ​ကို​ဖောက် ​ဖျက်​ဆီး ​ခြင်း၊ ​မြေ​ဩ​ဇာ ​အိတ်​များ ​ကို ​ဖျက်​ဆီး​ပြီး ​မြေ​ကြီး ​ပေါ် ​ပြန့်​ကျဲ​သွား ​သည် ​အ​ထိ ​ရ​စ​ရာ ​မ​ရှိ​အောင် ​အား​လုံး​ဖျက်​ဆီး​ပစ် ​ထား​သည်။ ​နောက်​ပြီး ​ရွာ​တွင်း​ရှိ​ဆိုင်​ကယ် ​များ​ရဲ့​အင်​ဂျင်​ဝိုင် ​ထဲ​တွင်​ဆား​များ​ထည့်​ထား​ခဲ့​သည်။ ​ဦး​ဇင်း​တစ်​ပါး ​သည် ​ဤ​သို့​သော ​ဖြစ်​ရပ်​ကို ​ဘု​ရား​ကျောင်း​က​နေ ​တွေ ့့​မြင်​ခဲ့ ​သည်။
​မေ​လ ၁၄-၁၆ ​ရက်​တွင်​လည်း ​ထို​နည်း​တူ ​အက်​ကြီး​ရွာ​ရှိ ​အိမ်​ခြေ ၂၅ ​လုံး ​နှင့် ​ဝိုး​လုံ​ရွာ ​ရှိ ​အိမ် ​ခြေ ၃၂ ​လုံး ​တို ့​သည်​လည်း ​ထို​နည်း​တူ​ဖျက်​ဆီး​ခံခ့ဲ​ရ ​ပြီး ​ဝိုး​လုံ​ကျေး​ရွာ​တွင်း ​ရှိ ​နေ​အိမ်​နှ စ်​အိမ် ​မော်​တော်​ဆိုင်​ကယ် ​နှင့် ​လယ်​ထွန်​စက်​တို့ ​မှာ ​ပြာ​ဖြစ်​တဲ့​ထိ ​မီး​ရိှု. ​ဖျက်​ဆီး​ခြင်း​ခံ​ခဲ့ ​ရ​သည်။
ဝိုးလုံ ကျေးရွာအိမ်ရှိ စပါးမိျုးစေ့ နှင့် မြေဩဇာအိတ်အား သွန်မှောက်၊ဖျက်စီးခြင်း
​ဗ​မာ့ ​အ​စိုး​ရ​တပ်​မ​တော်​သည် ​ရွာ​သား ၆ ​ယောက်​အ​ပေါ် ​စစ်​အ​ကာ​အ​ကွယ်​အ​ဖြစ် ​စေ​ခိုင်း​ခြင်း။
​မေ​လ ၁၈ ​ရက်​နေ့​တွင် ၉ ​မိုင်​အ​ကွာ ​ရှိ​တဲ့ ​ပန်​လော့​ကျေး​ရွာ​က​နေ ​နောင်​ကွမ်​ကျေး​ရွာ ​အ​သွား ​ဗ​မာ ​စစ်​အ​စိုး​ရ​စစ်​တပ်​တို ့​သည် ​ရွာ​သား ၆ ​ယောက်​ကို ​အ​တင်း​ခေါ်​ယူ​ပြီး​စစ် ​အ​ကာ ​အ​ကွယ်​အ​ဖြစ် ​စေ​ခိုင်း​ခဲ့​သည်။
​ဗ​မာ​အ​စိုး​ရ​စစ်​သား ၁၀၀ ​လောက်​က ​အ​ရှေ ့​မှ ​ဦး​ဆောင်​ခါ ​တ​ည​လုံး​လျှောက််​ရ​သည်။ ​လမ်း​တစ် ​လျောက်​တွင် ​အ​စား​အ​စာ ​နှင့် ​ရေ ​တိုက်​ကျွေး​ခြင်း ​လုံး​ဝ​မ​ရှိ​ခဲ့ ​ပါ။ ​နောက်​နေ ့​မေ​လ ၁၉ ​ရက်​တွင် ​ပန်​လော့ ​ကျေး​ရွာ ​အ​တွင်း​တွင် ​ပြန်​လွှတ်​ခဲ့​သည်။
​ဗ​မာ့​အ​စိုး​ရ​တပ်​မ​တော်​သည် ​ရွာ​သား ၆ ​ယောက်​အ​ပေါ် ​စစ်​အ​ကာ​အ​ကွယ်​အ​ဖြစ် ​စေ​ခိုင်း​ခြင်း။
​မေ​လ ၂၀ ​ရက်​နေ ့​တွင် ​နောင်​ကွမ်​ကျေး​ရွာ​က​နေ ​နမ့်​ဝါ ​ကျေး​ရွာ ​အ​သွား ​ရွာ​သူ​ကြီး ​ဥိီး​တေ​ဝိန် ​နှင့် ​အ​တူ ​ရွာ​သား ၅ ​ယောက် ​ကို ​အ​ယောက် ၁၀၀ ​ရှိ​တဲ့ ​ဗ​မာ့​တပ်​မ​တော် ​၏ ​စစ်​အ​ကာ​အ​ကွယ်​အ​ဖြစ် ​စေ​ခိုင်း​ခြင်း​ခံ​ခဲ့ ​ရ​သည်။ ​ဗ​မာ့​စစ်​တပ် ​တို ့​သည်​နောင်​ကွမ်​ကျေး​ရွာ​က​နေ ​မ​နက် ၂ ​နာ​ရီ​ခန် ့​တွင် ​စ​ထွက်​ပြီး ​နောက်​နေ့​မေ​လ ၂၅ ​ရက် ​မ​နက် ၅ ​နာ​ရီ ​အ​ချိန်​တွင် ​နမ့်​ဝါ ​ကျေး​ရွာ​ကို ​ရောက်​လာ ​သည်။ ​လမ်း​တစ်​လျောက်​လုံး ​အ​တွင်း ​အ​စား​အ​စာ​အ​ပြင် ​ရေ​တိုက်​ကျွေး​ခြင်း​လုံး ​ဝ​မ​ရှိ​ခဲ့​ပါ။ ​နမ့်​ဝါ ​ကျေး​ရွာ​ရောက်​တဲ့​ချိန် ​မှ ​သူ​တို​လွှတ်​မြောက်​ပြီး ​အိမ်​ပြန်​ခွင့် ​ရ​လာ​ခဲ့​သည်။ ရွာ​သား​နှစ်​ယောက်​၏ ​နာ​မည် ​မှာ ​စိုင်း​မြင့် ​အ​သက် ၃၅ ​နှစ်​နှင့် ​စိုင်း​စ​န္ဒီ​မာ ​အ​သက် ၃၂ ​နှစ်​တို ့့ ​ဖြစ်​သည်။
​ဝိုး​လုံ​ရွာ​မှ ​သေ​ဆုံး​သူ ၅ ​ယောက်​အ​လောင်း​တွေ့​ရှိ
​မေ​လ ၁၂ – ၁၃ ​ရက်​နေ့ ၂၀၁၆ ​ခု​နှစ်​တွင် ​ဝိုး​လုံ​ရွာ​တွင် ​စစ်​ပဲွ​ပြင်း​ထန်​စွာ​ဖြစ်​ခဲ့​သည်။ ​ထို​အ​ချိန်​တွင် ​ဝိုး​လုံ​ရွာ​သား ​အ​များ​မှာ ​သူ​တို့​အိမ်​မှ ​ပန်​လော့ ​သို့ ​စစ်​ပြေး​ဒု​က္ခ​သည် ​အ​ဖြစ်​ထွက်​ပြေး​တိမ်း​ရှောင်​ခဲ့ ​သည်။​ပြင်း​ထန်​သော​တိုက်​ပွဲ ​ငြိမ်​သက်​ပြီး​နောက်
​မေ​လ ၂၀ ​ရက်​နေ့​တွင် ​ရွာ​သူ၊​သား ​များ ​မိ​မိ​အိမ်​ကို ​ပြန်​လာ​ခဲ့​ရာ ​သူ​တို့​၏ ​ပိုင်​ဆိုင်​ရာ​ပ​စ္စည်း ​နှင့် ​အိမ်​တို့​မှာ ​ပျက်​စီး​ဆုံး​ရှူံး​သည်​ကို​မြင်​လိုက်​ရ​သည်။​အိမ် ၂ ​အိမ်​မှာ​မီး​လောင်​ကျ​ခဲ့​သည်။ ​အိမ်​တစ်​အိမ်​အား​သွား​ရောက်​ရှင်း​လင်း​ရာ ​ထို​အိမ်​သည် ​ဆ​ရာ​ဝန်​လောင်း​ဖြစ်​သူ ​လုံး​စော​ဗေ​ဒ ​အိမ်​ဖြစ်​ပြီး ​သေ​ဆုံး​သူ ၂ ​လောင်း​ကို​တွေ့​ရှိ​ခဲ့​သည်။
​လုံး​ထွန်း​အောင် ​၏ ​အိမ်​အ​နောက်​ဘက်​တွင် ​ရှိ​သော​အိမ်​သာ​ကျင်း​ထဲ​တွင် ​သေ​ဆုံး​သူ ၂ ​ယောက်​ကို​တွေ့​ရှိ​သည်။
​ရွာ​အ​ပြင်​ဘက်​တွင် ​သေ​ဆုံး​သူ​တစ်​ယောက်​၏ ​အ​လောင်း​ကို​တွေ့​ရှိ​သည်။​ရွာ​မှ ၁၅ ​မိ​နစ် ​လမ်း​လျှောက်​ရ​သည်။
ဝိုးလုံကျေးရွာ အိမ်သာကျင်းထဲမှ အမည်မသိ ရွာသား ၂ ယောက်၏အလောင်း
​သေ​ဆုံး​သူ​အ​လောင်း ​မှာ​မည်​သူ​မည်​ဝါ ​ဖြစ်​ကြောင်း​မ​မှတ်​မိ​နိုင်​ပေ။​သို့​သော် ​မေ​လ ၁၃ ​ရက်​နေ့​က​ပျောက်​ဆုံး​သွား​သော​ရွာ​သား​တို့​မှာ ​ထို​လူ​သေ​လောင်း​တို့​ဖြစ်​နိုင်​သည် ​စိုး​ရိမ် ​နေ​ကြ​သည်။​ပျောက်​ဆုံး​သွား​သော​လူ​များ​မှာ –
၁။ ​စိုင်း​ကျော်​လွန်း ​အ​သက် ၄၀ ​နှစ်် ​ဝိုး​လုံ​ရွာ​သား ( ​မိ​ဘ ​အ​မည် ၊ ​လုံး​လိုင်း​ခမ်း ၊ ​နိုင်း​တိ )
၂။ ​စို်င်း​ပေါ် ​အ​သက် ၂၃ ​နှစ် ​ဝိုး​လုံ​ရွာ​သား (​မိ​ဘ ​အ​မည် ၊ ​လုံး​စော၊ ​ပါ​ညွှန့် )
၃။ ​စိုင်း​ထွန်း​ရွှေ ​အ​သက် ၃၃ ​နှစ် ​အက်​ကြီး​ရွာ​သား ( ​ဇ​နီး ။ ​နန်း​ဆိုင်​လှ )
၄။ ​စို်င်း​ကျော် ​အ​သက် ၂၂ ​နှစ် ​ပန်​ကျန်​ရွာ​သား ( ​မိ​ဘ ။ ​လုံး​စံ​ထွန်း ၊ ​ပါ​ထွန်း)
​စိုင်း​ဟော်​ရှဲန် + ၆၆ (၀) ၆၂-၉၄၁-၉၆၀၀ (​ရှမ်း | ​အင်္ဂ​လိပ်)
​စိုင်း​ခွန်း​မိုင် + ၆၆ (၀) ၉၄-၆၃၈-၆၇၅၉ (​ဗ​မာ| ​အင်္ဂ​လိပ်)